Ahụmahụ nke International Potato Center na nkwalite ngwaahịa nduku - Journal "Potato System"
Isi Mgbari Sayensị
Ahụmahụ nke International Potato Center na nkwalite ngwaahịa nduku
в Akụkọ ụwa, Sayensị, News, Omume / Etu, The Economy
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke International Potato Center na-enyocha mmetụta nke ụzọ PMCA na-akpali mmepụta ihe ọhụrụ ahịa na mmepe nke agbụ ọnụ ahịa dị iche iche gburugburu ụwa. Ejiri ya na Andes na 2000s, usoro PMCA wepụrụ usoro ọhụrụ na Peru nke butere nnukwu mmepe ngwaahịa yana ịbawanye ahịa nke ọtụtụ ụdị nduku mpaghara nke ndị na-azụ ahịa na-amachaghị. Ike nke PMCA bụ na ọ gụnyere iso ndị na-eme ihe na-arụkọ ọrụ ka ha ghọta na ịchọpụta mkpa na nchegbu nke onye ọ bụla nọ na ọnụ ahịa uru, site na ndị ọrụ ugbo ruo ndị ahịa na ndị ahịa ruo ezinụlọ.
Maka ọmụmụ ihe ahụ, ndị na-ede akwụkwọ nyochara ihe ndekọ asatọ nke ọma ebe a na-eji PMCA mee ihe n'ụdị dị iche iche: Sub-Saharan Africa, Asia, Central Europe, na Latin America. Ha chọpụtara na PMCA na-arụ ọrụ kacha mma na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mma. Ndị otu ahụ kwubiri na iji usoro dị ka PMCA nwere ike inyere ndị otu R&D aka ịzaghachi ihe ndị ahịa chọrọ.
Doug Horton, bụ́ onye na-ede akwụkwọ, na-ekwu, sị: “N’ịbụ onye leruo usoro a anya n’usoro ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ, ọ tụrụ anyị n’anya nke ukwuu ịmata na e jiriwo PMCA mee ihe n’agbụ dị oké ọnụ ahịa maka ihe karịrị 20 ngwaahịa ugbo na Africa, Asia, Eastern Europe na Latin America. America! ”
Mgbalị ịzụlite ụzọ ọhụrụ a malitere n'okpuru mmemme mpaghara Papa Andina nke CIP na-edu. Site na mmemme a, PMCA enyerela aka wulite njikọ n'etiti obere ndị ọrụ ugbo na ndị ọzọ n'akụkụ ọnụ ahịa bara uru, yana rute n'ahịa niche bara uru maka ngwaahịa ọhụrụ na nke edoziri, nke na-abụkarị ụdị nduku mpaghara abaghị uru na nke ejighị ya.
Na-elekwasị anya na obodo mepere emepe na mgbe e mesịrị na mbupụ ahịa, PMCA nwetara ewu ewu na Peru na ndị na-erite uru na-amụba ngwa ngwa ruo ihe karịrị 100 obere ndị ọrụ ugbo na ndị ahịa ahịa, yana ọtụtụ ngwaahịa gourmet mepụtara dabere na poteto mpaghara. Ndepụta a gụnyere ibe nduku mpaghara nwere agba pụrụ iche, poteto Andean ngwa ngwa mashed na poteto gourmet T'ikapapa, bụ ndị meriri nturu ugo 000 World Challenge Award na Initiative for Promoting Entrepreneurship for Sustainable Development (SEED).
Na 2004, CIP na ndị ọrụ ugbo Andean nduku na ndị isi nri Peruvian rụkọrọ ọrụ iji nyere aka melite onyonyo na ojiji nduku mpaghara na ụlọ nri. Taa efere nduku obodo na-ewu ewu na Lima.
PMCA na-aga nke ọma na-adabere kpamkpam na mmekorita ya na ndị mmekọ mmepe na ọkwa niile. André Deveaux, onye na-ede akwụkwọ na ọmụmụ ihe ahụ, na-ekwu, sị: "Ihe dị mkpa bụ ntinye aka nke ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri bara uru, gụnyere obere ndị na-emepụta ihe, ndị ọchụnta ego na ndị na-enye ọrụ dị mkpa, iji wulite ntụkwasị obi na ịkwalite mmụta ndị ọgbọ iji kpalie ọhụrụ. ofụri uru yinye. Anyị na-eme nke a site n'ilekwasị anya na ohere ahịa nkwonkwo na site na nzukọ otu na ihe omume ọha na eze na-etinye aka na ndị na-emekọ ihe ọnụ na-emekọ ihe ọnụ."
Ozugbo e guzobere mmekọrịta, CIP na-eme ka usoro ahụ dị mfe site n'inyere ndị na-ahụ maka aka aka ịmata ihe ọhụrụ azụmahịa na inye nkwado ọrụ aka ebe ọ dị mkpa iji melite mmepụta na ịzụ ahịa. Ọrụ a nwere ike ịdị n'ụdị dị iche iche, dịka ọmụmaatụ site n'ịkwalite ọrịa pesti na ọrịa, ịchọpụta ụdị na usoro dabara adaba iji melite ogo mkpụrụ, na inye aka n'ịmepụta nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ, akara na akara n'ahịa.
PMCA dị irè karịsịa mgbe ya na ndị otu adịghị ike na-arụ ọrụ. “Ngwa nke PMCA na agbụ bara uru enyerela ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa aka isonye na irite uru na ahịa ọrụ ugbo. Ohere isonye na mmepe azụmaahịa jikọrọ ya na ndị ọzọ na oke ọnụ ahịa na-enyere ụmụ nwanyị aka ịdebanye aha na ịgbasa azụmaahịa mkpụrụ akwụkwọ nri ha na Central Uganda,” Sara Mayanja, Onye nyocha CIP si Uganda kwuru.
Site na mgbanwe dabara na ọnọdụ mpaghara, PMCA ejiriwokwa mee ka ụdọ ọnụ ahịa uru nduku sie ike na West Java, Indonesia; kọfị na San Martin, Peru; ọtụtụ ngwaahịa mpaghara na Albania gụnyere herbs, ngwa nri, mkpụrụ, mushrooms na mmanụ oliv.
Ọ bụ ezie na ndị otu ahụ nwere obi ụtọ na nsonaazụ ndị e depụtara na ọmụmụ ihe ahụ, Onye isi RTB Graeme Thiele kwenyere na enwere ohere maka mmejuputa ya: "Nsonaazụ ahụ nwere ike ịka mma ma ọ bụrụ na anyị wepụta usoro nhazi dị irè maka iji PMCA eme ihe. Ntugharị kwesịrị ekwesị nke ihe ọhụrụ dị ka PMCA bụ ngwọta dị irè maka nsogbu ogologo oge nke mmejuputa usoro usoro na nsonye na nyocha ọrụ ugbo na òtù mmepe."
isi: Ebe International Potato Center
Tags: nduku ngwaahịapotetoahiaInternational nduku centerPerunkwalite ngwaahịa
Na mpaghara Novgorod, otu ugbo na ọkara karia ihe ubi nduku
Mpaghara Orenburg na-abawanye mmepụta nke poteto na akwụkwọ nri